IiBrokers ze-Forex ezigqwesileyo zika-2021 🥇-Izinto eziluncedo kunye neeNxuluwa ezityhiliweyo!
Funda 2 Urhwebo olucetyiswayo
I-2021 YABASEBENZI BABASEBENZI BENKQUBO
Ngaphambi kokudlulela kuluhlu lwethu oluhlaziyiweyo lwabathengisi abaphambili be-forex ye-2021, nanga amanyathelo ambalwa okukunceda ukhethe umthengisi olungileyo kuwe.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ukurhweba kwi-Intanethi kuye kwanda kakhulu. Lushishino olutsha, kodwa inani lababoneleli ngeenkonzo okanye iarhente ziqwalaselwe. Uninzi Abarhwebi bonelela ngeenkonzo ezinkulu, kodwa abarhwebi kufuneka baqinisekise ukuba umthengisi abakhethileyo ubonelela ngezinto abazifunayo.
Into yokuqala yokujonga xa uphonononga umthengisi we-forex kukuba zilawulwa ligunya elithembekileyo lezemali. Emva koko jonga ukwenziwa kwabo kunye nokutyibilika ukuze urhwebo lungajiki lubeyiphupha elibi. Iindleko zokurhweba, ukusasazeka, zibalulekile xa kuqwalaselwa ukurhoxiswa kunye namaqonga orhwebo kunye nenkxaso kubathengi enikezelwayo. Ukukunceda, sinikezela ngesikhokelo senyathelo nenyathelo kwi Ukukhetha umrhwebi ezilungele iimfuno zakho zokurhweba.
Ukubaluleka Okukhulu koPhononongo lwangempela loMthengisi
Ukurhweba nomrhwebi ongathembekiyo kufana nokungena emfazweni ngaphandle kwesikrweqe. Xa abarhwebi besenza oku, bazibeka emngciphekweni ongalindelekanga, ongafunekiyo. Kubalulekile ukwenza umsebenzi wesikolo ngaphambi kokukhetha umrhwebi ofanelekileyo. Kwi-Learn 2 Trade siyazingca ngokwazi kwethu ukubonelela ngeyona nto ichanekileyo nengakhethi cala uphononongo lwabarhwebi kunokwenzeka. Njengeengcali kwicandelo, siyazi ukuba umthengisi we-forex ekumgangatho ophezulu yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yakho yorhwebo kunye nolondolozo lwenkunzi. Funda ngo-2 Urhwebo luthathe ixesha elininzi kunye nomzamo wokuhlanganisa okubalulekileyo Isikhokelo esichazayo kwii-Forex Brokers.
Ngelixa i-multi-trillion ipondo ishishini labarhwebi be-forex lalikhe lagcinwa kuphela yeebhanki kunye namaziko emali, eli thuba sele livule iingcango zalo kubathengisi bemihla ngemihla.
Kananjalo, awunakuthengi kuphela kwaye uthengise ngezibini zangaphambili ezivela kwinduduzo yekhaya lakho, kodwa uninzi lwabarhwebi ngoku bavumela urhwebo ngokuhamba ngesixhobo sakho esiphathwayo.
Nangona kunjalo, ngekhulu labathengisi be-forex ngoku abasebenza kwimarike yase-UK, uyazi njani ukuba yeyiphi iqonga oza kuhamba nalo? Kulapho singena khona.
Kwisikhokelo sethu kwi Abarhwebi abaPhambili base-UK- Uyifumana njani i-Forex Broker kwi2021, Siza kuchaza ii-ins kunye nokuphuma kwento ekufuneka ujonge kuyo xa ukhetha iqonga. Oku kubandakanya umgaqo, iifizi, ukusasazeka, iintlawulo, kunye nokunye.
Qaphela: Ukuba usebenzisa i-forex broker eyamkela abathengi abavela e-UK, qiniseka ukuba iqonga lilawulwa yi-FCA. Ukuba ayisiyiyo, umrhwebi usebenza ngokungekho mthethweni.
Yintoni uMthengisi we Forex?
Ukuba ujonge ukufikelela kwiimarike ze-forex zehlabathi njengomrhwebi wentengiso, kuyakufuneka usebenzise umthengisi we-forex. Kwindlela yayo esisiseko, umthengisi weqonga liqonga lokurhweba elikwi-Intanethi elikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimali. Umrhwebi ekuthethwa ngaye usebenza ngokufanelekileyo njengomntu wesithathu, ngaphandle kokuba iyahambelana neeodolo zakho kunye nabanye abathengisi beqonga. Ngokwenza njalo, kuyakuthatha imali encinci.
Oku kuya kuza ngohlobo lwekhomishini yorhwebo, kunye nokusasazeka. Ukusasazeka ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso, kwaye ukubanzi ukusasazeka, kokukhona uhlawula ngokungathanga ngqo kwimirhumo. Kananjalo, yiyo loo nto sikhetha abathengisi be-forex ababonelela ngemirhumo ephantsi kakhulu kunye nokusasazeka okuqinileyo.
Nangona kunjalo, umthengisi we-forex okhethileyo uya kudwelisa inani 'leepara zemali'. Isibini ngasinye sineemali ezimbini ezikhuphisanayo, ezinjenge-GBP kunye ne-EUR. Umgaqo ophambili kukucinga ukuba inqanaba lotshintshiselwano lwesibini semali liza kunyuka okanye lihle. Ukuba uqikelelo lwakho luchanekile, uyakwenza inzuzo. Ukuba ayisiyiyo, awuyenzi.
Ngokwenkxaso mali kwiakhawunti yakho yomthengisi we-forex, uninzi lwamaqonga amkela nokuba yidebhithi / ikhredithi okanye ugqithiselo lwebhanki. Nangona kunjalo, abanye abathengisi baya kwamkela ii-e-wallets ezinjengePayPal kunye neSkrill. Okokugqibela, i-UK forex brokers kufuneka ilawulwe liGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA), ke qiniseka ukuba usebenzisa umthengisi onelayisensi ngaphambi kokuba ubhalise.
Zeziphi iingenelo kunye neengozi zokusebenzisa i-Forex Broker?
Amakhulu ama-brokers onokukhetha kuwo
Thenga kwaye uthengise i-forex ngonqakrazo lweqhosha
Ukurhweba nge-Forex akukho lula- ungaphulukana nemali
Zeziphi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha uMthengisi we Forex?
Isithuba somthengisi we-forex siye saba nokhuphiswano olukhulu kule minyaka idlulileyo, kunye namakhulu amaqonga ngoku anikezela ngeenkonzo zawo kubarhwebi base-UK. Kwelinye icala, oku kuhle kuwe njengomrhwebi njengoko kukunika ithuba lokukhetha umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho zorhwebo. Nangona kunjalo, ukwazi ukuba leliphi iqonga lokungena kunye nalo alikho mngeni kuphela kodwa litya ixesha.
Kananjalo, apha ngezantsi sidwelise ezona metric zibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha i-forex broker ekwi-Intanethi.
Into yokuqala ekufuneka uyijongile xa kuvavanywa ubungqina bokuba ngumrhwebi omtsha kukuba ingaba unalo na ityala elisemthethweni lokwamkela abarhwebi base UK. Njengoko siqaphele umzuzwana nje odlulileyo, bonke abarhwebi base-UK kufuneka babambe ilayisensi yokuthengisa evela kwi-FCA.
Oku kuqinisekisa ukuba iqonga lisebenza ngaphakathi kwe-UK kunye nomthetho we-EU. Oku kukwaqinisekisa ukuba uqhele imigaqo yokhuseleko, njengokuhlulwa kwemali yabathengi kunye neNkqubo yoKhuselo lwabatyali mali yeFCA.
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ukuba yeyiphi idiphozithi kunye nokukhetha ezifumanekayo kumthengisi omkhethileyo. Oku kuqala kwangoko ngenkqubo yenkxaso mali yeakhawunti. Uninzi lwabarhwebi be-forex luya kukuvumela ukuba ubeke imali kwiakhawunti yebhanki yase-UK, nangona kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba udluliselwe.
Ukuba ujonge imali ebekiweyo kwangoko kwaye ke-ukuqala ukurhweba kwangoko, kunokuba kubhetele ukusebenzisa i-broker exhasa i-debit / amakhadi etyala okanye i-e-wallet njengePayPal.
Nangona inani labathengisi be-forex abasebenza kwindawo yokurhweba yase-UK ikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimali ngaphandle kwekhomishini, ayizukuhlala kunjalo. Ukuba usebenzisa i-broker esekwe, kusenokwenzeka ukuba uya kuhlawuliswa ngenqanaba eliguqukayo kurhwebo ngalunye olwenzayo.
Umzekelo, ukuba umthengisi we-forex uhlawulisa i-0.2% kwiikhomishini zorhwebo, kwaye uthenge i- $ 1,000 yexabiso le-GBP / USD, uya kuthi uhlawule i- $ 2. Ukuba uvale i-GBP / USD yorhwebo lwakho xa yayixabisa i- £ 1,200, uya kuphinda uhlawuliswe i-0.2% - eya kuthi ibe yi- $ 2.40 kwikhomishini.
Ngelixa sikwimiba yemirhumo, kuya kufuneka wenze ingqwalaselo malunga nokusasazeka. Kulabo abangaziyo, lo ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' amaxabiso ebhendi yakho oyikhethileyo. Ukusasazeka kumiselwe linani le 'pips' phakathi kokuthenga nokuthengisa amaxabiso, kwaye iya kuba nefuthe ngqo kumandla akho okwenza inzuzo.
Umzekelo, ukuba ukusasazeka kwe-EUR / USD yayiziipipi ezi-2, oku kuthetha ukuba urhwebo lwakho luya kufuna ukonyuka ngexabiso ubuncinci ngee-2pips ukuze uphule. Njengoko ukusasazeka yenye yeendlela ezibaluleke kakhulu ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi omtsha, sidwelise umzekelo okhawulezileyo apha ngezantsi wokucoca inkungu.
Uthengisa i-GBP / i-USD kumthengisi wakho we-forex okhethiweyo
Ixabiso 'lokuthenga' ngu-1.3100
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.3104
Njengoko ukusasazeka kumiselwe kwiipips, kufuneka sijonge kwinani lokugqibela kuwo omabini amaxabiso
Kulo mzekelo, umahluko ngu-4, oko kuthetha ukuba ukusasazeka kwi-GBP / USD kufikelela kwii-4 iipips
Le nto inokuthi ingabi yinto efanelekileyo xa unomdla wokunamathela kwisibini sokurhweba njenge-GBP / USD okanye i-EUR / USD. Ngapha koko, abanye babathengisi be-forex abaphumeleleyo kwisithuba baya kuthi ga-phantsi kwisibini semali, kunokuba bazame ukwahluka kwiimarike ezininzi.
Ngale nto ithethwayo, ukuba uluhlobo lomrhwebi onqwenela ukufikelela kwimfumba yezibini ezahlukeneyo ze-forex, uya kuba ulungile ekukhetheni umthengisi onokhetho oluhle kakhulu lweejors, abancinci, kunye neexotic. Ungakuvavanya oku ngewebhusayithi yomthengisi ngaphandle kokufuna ukuvula iakhawunti.
Kwelinye icala, uhlalutyo lweendaba olusisiseko lubaluleke kakhulu kwisithuba se-forex. Umzekelo, xa i-UK ivotela ukushiya i-European Union, oku kube nefuthe elibi kwi-GBP. Nangona kunjalo, uhlalutyo lobuchwephesha- eyinkqubo yokuhlalutya imeko yamaxabiso embali, ngokulinganayo kubalulekile.
Kananjalo, kuya kufuneka ukhethe umthengisi we-forex onikezela ngezibonisi ezininzi zobuchwephesha ngaphakathi kwesuti yayo yorhwebo. Ubuncinci, oku kuya kubandakanya oku kulandelayo:
Abarhwebi baseNewbie bahlala bekujonga ukubaluleka kwenkxaso yabathengi. Emva kwayo yonke loo nto, kungafika ixesha apho ufuna uncedo kwimicimbi enxulumene neakhawunti. Kananjalo, kuya kufuneka unamathele kubarhwebi ababonelela ngemfumba yeendlela zonxibelelwano- ezinje ngengxoxo ebukhoma, i-imeyile kunye nenkxaso yomnxeba.
Ngapha koko, kuluncedo ukuba iqela lenkonzo yabathengi lisebenza kwi-24/7 ngesiseko sokujonga oko kushishino lokuthengisa kwangaphambili. Ukugqibela okokugqibela kwikhekhe kuxa abathengisi be-forex banokubakho esidlangalaleni kwimidiya yoluntu.
Ndisayina njani ukuba ndibhalise noMthengisi we Forex? Inyathelo-nge-Nyathelo lokuHamba
Ukuba ufumene umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho, kuya kufuneka uvule iakhawunti, uqinisekise isazisi sakho, kwaye ufake imali ngaphambi kokuba uqale urhwebo. Apha ngezantsi sidwelise amanyathelo abalulekileyo oya kuthi awalandele.
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka undwendwele iwebhusayithi ye-broker yakho oyikhethileyo kwaye uvule iakhawunti. Ekuqaleni kuya kufuneka unikezele ngolwazi lomntu siqu, njengegama lakho, umhla wokuzalwa, idilesi, imeko yerhafu kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Emva koko, kuya kufuneka ubonelele ngolwazi lwezezimali. Oku kufanele kubandakanya imeko yakho yengqesho, ukuba urhola malini, kunye noqikelelo lwexabiso lakho. Oku kukuqinisekisa ukuba umthengisi ulungisa iimveliso ezifanelekileyo zokuma kwakho kwemali.
Inyathelo 2: Faka amava akho okuThengisa kwangaphambili
Abarhwebi base forex base UK bayacelwa ukuba bavavanye ukuba yeyiphi amava onawo ngaphambili. Emva kwayo yonke loo nto, urhwebo lwe-forex luqukethe izixhobo zezezimali eziphucukileyo, ke kubalulekile ukuba uyazi into oyenzayo. Kananjalo, kuyakufuneka uxele uhlobo lotyalo-mali olwenzileyo ngaphambili, kunye nobungakanani obuphakathi bezorhwebo lakho.
Uya kuthi emva koko uphendule imibuzo ekhethiweyo. Oku kusekwe emngciphekweni wokusebenzisa amandla kumashishini akho. Ukuba awukwazi ukuphendula imibuzo ngokuchanekileyo, ngekhe ube nakho ukurhweba kumda.
Phambi kokuba ufake imali, kuyakufuneka uqinisekise isazisi sakho. Nangona inkqubo ye-KYC (Yazi umThengi waKho) inokwahluka ngokuxhomekeke kumrhwebi ongumbuzo, kuya kufuneka ulayishe ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente. Oku kunokuba yipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Ngamanye amaxesha, unokucelwa ukuba ulayishe ikopi yesiteyitimenti sebhanki okanye into oyisebenzisayo ukuze uqinisekise idilesi yakho.
Inyathelo 4: Fundisa iAkhawunti yakho yeBroker
Nje ukuba umthengisi we-forex aqinisekise amaxwebhu akho e-KYC, ungabeka iimali ezithile. Kwakhona, iindlela ezithile zokuhlawula ziya kwahluka ngokuxhomekeka kumrhwebi, nangona oku kuhlala kubandakanya ukudluliselwa kwebhanki okanye ikhadi lebhanki / lekhredithi.
Ukuba yeyokugqibela, idipozithi yakho ifanele ifakwe ngephanyazo, oko kuthetha ukuba ungaqala ukurhweba kwangoko. Ukuba ukhetha ukudluliselwa kwebhanki, kwaye ayithethi ngeNtlawulo ekhawulezileyo yase-UK, kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba idiphozithi icace.
Inyathelo 5: Qala ukuRhweba ngeForex
Ngoku ukuba uvule iakhawunti, waqinisekisa isazisi sakho, kwaye wafaka imali- ngoku ungaqala ukurhweba. Ukuba awuzange uthengise i-forex ngaphambili, sinokucebisa ukuba uqale ngexabiso elincinci. Oku kuyakuvumela ukuba ubambisane nendlela i-forex esebenza ngayo kuseto lwehlabathi lokwenyani, ngaphandle kokubeka emngciphekweni isixa esikhulu semali.
Olunye ukhetho olufumanekayo kukusebenzisa iqonga ledemo lomthengisi we forex. Oku kukuvumela ukuba urhwebe ngemali ebonakalayo, ngenxa yoko awuzukubeka emngciphekweni ipeni enye. Nangona kunjalo, awuzukufumana amava okulahleka, ngenxa yoko ukusebenza kweakhawunti yeedemo kuncitshisiwe.
Siwajonga njani amaNqanaba ethu okuCebisa aMazwe aBarhwebi?
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba kufuneka ujonge phi xa ufumana iqonga lokurhweba elihlangabezana neemfuno zakho, ngoku siza kudwelisa ezona zikhetho zethu ziphambili ze-5 ze-broker ze-2021. Inkqubo yokulinganisa esiyisebenzisa ngaphambi kokucebisa umrhwebi kwindawo yethu.
Ngamafutshane, onke amaqonga ekucetyiswa ukuba adweliswe kuFundo 2 loRhwebo ahlolwe ngokuzimeleyo liqela lethu. Ukufezekisa oku, abavavanyi bethu bavule iiakhawunti kunye nomthengisi ukuze bafumane umbono we-360-degree ngendlela iqonga elisebenza ngayo. Oku kubandakanya inkqubo yobhaliso, ukufaka imali, ukwenza nokwenza ii-odolo, ukuphonononga ukusasazeka, kunye nokuvavanya inkxaso kubathengi.
Apha ngezantsi sidwelise ubuncinci beekhrayitheriya esizilindeleyo ukuba sizibone kumthengisi we-forex wase-UK:
✔ Imiselwe yi-FCA
✔ Iikomishini eziphantsi
✔ Iindlela ezininzi zeDiphozithi kunye nokuRhoxa
✔ Ukusasazeka ngokuhlwa
✔ Iimfumba zeZibini eziXhaswayo ze-Forex
✔ Iqonga lokuThengisa elisebenziseka lula
✔ Ukhetho oluLungileyo lweeMpawu zeTekhnoloji
✔ Inkxaso yabaThengi ephezulu
Iindawo ezi-5 eziBalaseleyo zeBroker kwi2021
Olu luhlu lulandelayo lwabarhwebi be forex luhlangabezana nazo zonke ezona mfuno zisezantsi zichazwe apha ngasentla.
3.Capital.com -Khomishinala-yasimahla yeBroker yabaQalayo (Ubuncinci beDeposithi kuphela i-US $ 20)
Inombolo 3 kuluhlu lwethu lwabarhwebi ababalaseleyo kwi2021 yiCapital.com. Eli qonga lifanelwe ngokufanelekileyo kwi-newbies ngezizathu ezahlukeneyo. Okokuqala, kufuneka ubeke idola engama-20 kuphela ukuze uhambe. Okwesibini, iwebhusayithi iyasebenziseka kwaye ayikhululekanga kwijoggon enzima ngamanye amaxesha enxulunyaniswa namaqonga orhwebo.
Ngapha koko, umrhwebi wamkela amakhadi etyala / amakhadi etyala kunye notshintsho lwentambo. Unokwenza idiphozithi usebenzisa iSofort, Neteller, Skrill, kunye nokunye. Kukho amawaka eemarike kunye neeasethi ezixhaswayo kwi-Capital.com, ezilungele iinjongo zokwahlukahlukana.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba kufana ne-EightCap, eli qonga ligxile kwizixhobo zeCFD. Iimarike zeCFD ezixhaswayo ziquka i-forex, i-indices, kunye ne-stocks. Inyani yokuba beza ngohlobo lwee-CFDs yibhonasi, njengoko oko kuthetha ukuba uyakwazi ukuthengisa okufutshane kwaye usebenzise amandla.
I-Capital.com ayihlawulisi ikhomishini kwaphela, nokuba yeyiphi na iklasi yeeasethi. Umrhwebi ukwabonelela ngokusasazeka okuqinileyo kunye nokubonakala. Ngaphaya koko, ukuba ufuna ukungena kwiakhawunti yakho ekuhambeni-unokuzikhuphelela iarhente yabarhwebi bendalo yokuthengisa. Esi sicelo seselfowuni siyafumaneka kubasebenzisi be-Android kunye ne-iOS.
Xa kuziwa kukhuseleko kunye nokuthembeka kweqonga, unokuphumla. I-broker ilawulwa kakhulu ngamaqumrhu awaziwayo afana ne-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB. Ukongeza, uya kufumana ukhetho olwahlukeneyo lomxholo wezemfundo, kubandakanya izikhokelo kunye namanqaku agubungela izifundo ezahlukeneyo zokurhweba.
I-100% ayikhokhomishini kumawakawaka eeasethi
I-CySEC, i-FCA, i-ASIC, kunye ne-NBRB zilawulwa
Ayiphambili ngokwaneleyo kubarhwebi abanamava
4. I-LonghornFX-Elona qonga liphambili lokurhweba nge Forex
Isishwankathelo, kuyathenjwa ukuba ngoku unolwazi olufunekayo lokufumana umthengisi we-intanethi okhawulezayo ohlangabezana neemfuno zakho. Nokuba ngummiselo, iifizi zokurhweba, iidiphozithi kunye notsalo, inkxaso kubathengi, izixhobo zokurhweba, okanye ukusasazeka- uyazi ngoku ukuba ujonge ntoni xa ukhetha iqonga elitsha.
Kananjalo, singacebisa ukuba uchithe ixesha elithile usenza uphando lwakho ngaphambi kokuvula iakhawunti, kwaye ngokuqinisekileyo ngaphambi kokufaka imali. Nangona kunjalo, ukuba musa Unalo ixesha lokuphanda amaqonga ngokwakho, kungakuhle ukuba uphonononge abarhwebi abaphambili be-5 esincokole ngabo ngasentla.
Umrhwebi ngamnye we-forex ugqwesa kwisebe elithile, njengentlawulo ephantsi, ukurhweba ngeselula, ubuhlobo bomsebenzisi, okanye ukuthembela. Ekugqibeleni, qiniseka ukuba uyayiqonda imingcipheko yokurhweba nge-intanethi kwi-intanethi. Ngelixa abanye abarhwebi banezakhono zokwenza ngokusisigxina ukuthenga nokuthengisa iimali, uninzi alunalo.
Iidiphozithi ezithile kunye neendlela zokurhoxa ezixhaswayo ziya kuxhomekeka kumthengisi we forex ovula iakhawunti naye. Oku kunokubandakanya ukutsalwa / amakhadi etyala, ukudluliselwa kwebhanki, okanye isipaji se-e njengePayPal.
Ndiza kufumana imali engakanani kunye nomthengisi we-forex wase-UK?
Ukuba usebenzisa i-broker yase-UK esekwe e-UK, iqonga liya kudinga ukuthobela imigaqo ebekwe yi-ESMA. Oku kuthetha ukuba ezona zibini ziphambili ze-forex zibekelwe amanqanaba okunyusa ama-30: 1, kunye nabantwana / ii-exotic kwi-20: 1. Nangona kunjalo, ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo, le mida inokuya kuthi ga kwi-500: 1 kwii-majors.
Yeyiphi idipozithi encinci efunekayo kumthengisi we-forex?
Ngelixa iidipozithi ezincinci ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, oku ngesiqhelo kumndilili we- $ 100 e-UK.
Kwenzeka ntoni ukuba umrhwebi wam wase-UK ophuma kwishishini?
Ukuba umrhwebi use-UK, kuya kufuneka ulawulwe yi-FCA. Kananjalo, ii-brokers kufuneka zahlule imali yabathengi kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo. Ngapha koko, unokufumana izibonelelo kwiNkqubo yokuKhusela abaTyalomali ye-FCA.
Ngawaphi amajelo enkxaso yabathengi abonelelwa ngabathengi be-forex?
Uninzi lwabarhwebi be forex baya kubonelela ngokudibanisa umnxeba kunye nenkxaso ye-imeyile. Amanye amaqonga aya kubonelela ngengxoxo ebukhoma.
Zithini iingenelo kunye nezinto ezimbi zokurhweba ngamabini angaphandle e-forex?
Izibini ze-forex ezingaqhelekanga zixhaphake kakhulu, eziluncedo kakhulu kubarhwebi abanobuchule be-forex abanqwenela ukwenza i-scalp inzuzo encinci. Nangona kunjalo, ukusasazeka kwezibini ezingaqhelekanga kuhlala kuyinto ephezulu kakhulu.
Luluphi usasazo endifanele ukujolisa kulo xa ukhetha umthengisi we-forex?
Ngelixa kungafanelekanga ukuba usekwe kwisigqibo sakho se-forex broker ikakhulu kwimirhumo, amanye amaqonga anamaxabiso okhuphiswano ngoku anikezela ukusasazeka kwee-0.7 iipips kwii-majors.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Disemba 19th, 2021